Ngokuzenzekelayo njenge-Instagram - Instagram Auto Like
Njengoko i-Instagram iphucula ekuchongeni unxibelelwano oluzenzekelayo kunye neenkampani ezibabonelelayo, Kuya kufuneka ulungele ukuzama iinkonzo ezininzi ukufumana eyona ilungileyo. Kodwa ngethamsanqa, sikwenzele yona kwaye nalu uluhlu lwethu lwezona zi-5 ze-Instagram auto ezifana ne-bots ngo-2021:
Kwaye ngoku, lixesha lokuba sijonge ngokusondeleyo kuluhlu lwethu lwe-5 ye-Instagram auto liker bots yokuzama ngoku.
#1 - Bot de Abalandeli Instagram
Ixabiso: I-100 lezigidi zeefoto kunye neevidiyo zilayishwa yonke imihla,I-99 EUR ngenyanga
Ixabiso: I-11.90 EUR ngenyanga
I-Instaboss yinkonzo yesiFrentshi ezenzekelayo ebanga ukuba ibonelela ngokwanda kokubonakala kunye nokuzibandakanya ngokwenza izinto ezizenzekelayo ngokuthanda kwi-bot yabo. Yintoni ebeka le nkampani ngaphandle, kukuzibophelela kwayo ekuxhaseni ngamnye kubasebenzisi bayo ekufumaneni ababhalisi babo bokuqala abali-1,000.
Ukuya kuthi ga kwi-akhawunti ye-IG ye-20.
Ixabiso: 13 EUR ngenyanga
Incoko ephilayo iyafumaneka ngenkxaso eqinisekisiweyo kwiiyure ezingama-24
Izizathu ezi-5 kunye nendlela yokuyilungisaYonke into malunga nokuphuma kwe-Instagram
Izizathu ezi-5 kunye nendlela yokuyilungisaUkufumana njani ukuthandwa ngakumbi kwi-Instagram : I-Instagram yenze lula inkqubo yokwenza imali kwi-intanethi kuye nabani na